भारतको अर्थ–राजनीति र कोभिड संक्रमणले थला पारेको भविष्य
२०७८ बैशाख १५ गते , बुधवार प्रकाशित
वास्तवमा भारतमा कोभिड–१९ संक्रमणको दोश्रो लहर अत्यन्तै घातक साबित भइरहेको छ । यो महामारीको भीषणताको अनुमान यस कुराबाट लगाउन सकिन्छ कि २४ घण्टाभित्र नयाँ संक्रमितको संख्या साढे तीन लाखभन्दा माथि गइरहेको छ । अनि सयकडौ मानिसहरुको यसबाट दिनदिनै मृत्यु भइरहेको छ। त्यसरी नै परीक्षण गरिएका पाँचजना मानिसमा एकजनमा संक्रमण देखिएको छ । यतिबोल भारतका अस्पतालहरु कोरोना संक्रमणको बिमारीले भरिभराउ बनेका छन् भने मूर्दाघर, श्मशाघाट र चिहानका क्षेत्रहरुमा लासै लासको थुप्रो लाग्न थालेको देखिएको छ । अहिले नै यस्तो कोरोना ताण्डबले यस्तो स्थिति बनाएको छ । अझ १५ मईसम्म यो माहामारी चरम उत्कर्षमा पुग्ने भनिदै गरेकोले त्यतिबेला कति भयावह र कोलाहलको स्थिति खडा होला अनुमान गर्दा पनि मन तर्सिन्छ ।कोरोना बिरुद्धको यो लडाईमा भारतका केन्द्र र राज्य सबैतिरका अस्पतालहरुको संरचनाको जग नराम्ररी हल्लिएको देखिदैछ । सरकारी तथा नीजी अस्पतालहरुमा न पर्याप्त मात्रमा अक्सिजन, न भेण्टिलेटर, न बेड, न जीवन रक्षक महत्वपूर्ण औषधी नै छन्। त्यहीमाथि अर्कोतिर डाक्टहरु नर्सहरु र म्यारा मेडिकल कर्मचारीहरु नै पनि कोरोना संक्रमणको निरन्तर शिकार बनिरहेका छन् । यसमा पनि थप चिन्ता र बिडम्बनाको थप कुरा के देखिएको छ भने यो महामारीको राष्ट्रिय बिपत्तिका बेलमा पनि स्वार्थन्धताले बिकृत बनेका मानसिहरु अक्सिजनका सिलिण्डर मात्रै होइन ,बमारीहरुका जीवन रक्षक औषधी तथा अन्य उपकरण्हरुको पनि ठूलो मात्रामा कालोबजारी गरेर आफ्नो गोजी भरिहरेका छन् । अनि स्वास्थ्य परीक्षमा पनि ठूलो मात्रामा लापरबाही भइरहेका खबरहरु बाहिरिएका छन् । कोरोना खोपको समेत कालोजबजारी मजाले चलिरहेको बताइन्छ । भारतभरी नै यतिबेला रेमडिसिभर इञ्जेक्शनको ठूलो हाकार मच्चिएको छ ।
भारतका मेडिकल प्राक्टिसनर्स र स्वास्थ्य सामाग्री किन्ने मानिसहरुको कथनलाई मान्ने हो भने त करीब साढे ५ हजार भारतीय रुपैया पर्ने त्यो इञ्जेक्शनलाई यतिबेला ३० देखि ४० हजार रुपैयामा बेचिने गरेको छ। अनि कुनै बेला भ्याक्सिन चोरी भएको खबर आउँदछ भने कुनै बेला प्रशासन र सरकारको नाकै मुनि ७५० देखि १००० भारतीय रुपैयासम्म पर्ने इञ्जेक्शनलाई १८००० रुपैयासम्ममा बेचिने गरेको कुरा पनि आउँदछ । अरु त अरु प्यारा सिटामोलका चक्कीहरु पनि यतिबेला १०० रुपैयासम्ममा बिक्री हुने गरेको कुरा पनि प्रकाशमा आइरहेको छ । पीडित बिमारीहरुकै कुरा सुन्ने हो भने त भारतमा भिटामिन सीका गोलीदेखि लिएर कागतीसम्मको मूल्य बढाएर असुल गरिरहेको पाइन्छ । आफ्नी आमालाई कोरोनाको उपचार गराउने क्रममा यस लूटतन्त्रको शिकार भएका एकजना सज्जनले के बताएको कुरा प्रकाशमा आएको छ भने ५००० मूल्यको अक्सिजनको सिलिण्डरलाई ४६ हजारभन्दा बढी मूल्य अशुल गरिएको छ । गएको बर्ष २ रुपैयामा पाइने मास्कलाई यतिबेला ६ रुपैया लिइदैछ । अनि छदेखि आठ सय रुपैयमा पाइने पल्स अक्सोमिटरको मूल्य यतिबेला दुइ हजारसम्म अशुलिदैछ । त्यस्तै डेढ–दुइ सयमा पाइने बाफ लिने इलेक्ट्रोनिक मेशिनलाई पाँचदेखि सात सय रुपैया लिइदैछ ।
औषधी तथा जीवनरक्षक उपकरणहरु यस्तो कालोबजारीका अतिरिक्त अर्को प्रमुख कारण जो यस महामारीको चेन तोड्न बाधक बनिरहेको छ त्यो हो कोरोना परीक्षणका बेलमा गरिने फर्जी कुरा । गम्भीर सूचना श्रोतहरुले बताएका छन् कि भारतका कतिपय अस्पतालमा मुनाफखोरीका लागि नक्कली कोरोना रिपोर्ट बनाउने खेल समेत चलिरहेको छ । भारत मुम्बइको पुणेमा यस्तै नक्कली काम गर्ने गिरोहलाई त्यहाँको पुलिसले केही समय पहिला पर्दाफास पनि गरेको थियो । त्यस गिरोहले कोरोना बिमारीहरुलाई नक्कली आरटीपीसीआर नेगेटिभ रिपोर्ट बनाएर दिन्थ्यो र त्यसको साटोमा मोटो रकम अशुल गर्ने गर्दथ्यो । यस्तै नक्कली प्रकरणहरु भारतका अन्य बिभिन्न शहरहरुमा पनि चलेको कुरा प्रकट भएका छन् ।
अझ गजबको कुरा त के छ भने कोरोनाको पहिलो लहरका बेला जतिबेला पूरै बिश्वलाई के सन्देह थियो भने सीमित श्रोत साधन र बिशाल जनसंख्याका कारण कोरोनाले भारतमा उत्पात मच्चाउने छ । तथापि कतिपय कदम उठाएर पहिलो लहरको कोरोनामाथि भारतले बिजय पाएको प्रतीत हुन्थ्यो र बिश्वले आश्चर्य पनि मानेको थियो । अनि भारतले यसका बिरुद्ध भ्याक्सिन पनि बनाएको थियो। तर अहिले दोश्रो लहर आउँदा आउदै भारतमा कसरी परिस्थिति नियन्त्रणभन्दा बाहिर गयो ? किन आज भरतको केन्द्रिय र राज्य प्रशासन यो भाइरसभन्दा कमजोर देखिए ? यतिबेला गम्भीर प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।
के कुरालाई पनि बिल्कुलै नकार्न सकिदैन भने भारतमा यस कोरोना कालले केवल भारतको स्वास्थ्य सेवाको स्थिति कति नाजुक छ भन्ने मात्र देखाएको छैन, समाप्त हुन थालेको मानबीय सम्बेदना र जीवनमूल्यको बास्तविकताको पनि मुखुण्डो उतारिदिएको छ । यस बिश्व महामारीको महायुद्धलाई सबै एकजुट भएर मात्र हल गर्न सकिन्छ । केही मुठ्ठीभर मानिसको अमानबीय चरित्र मानबीय मूल्यमाथि हाबी हुन सक्तैन भन्ने कुरा पनि यसरी एक जुट भएर मात्र पुनस्थार्पित गर्न सकिन्छ भन्ने महसुश भारतमा भइरहेको छ । बस्तुतः आजको भारतको अर्थ–राजनीतिले जे संकेत दिइरहेको छ त्यसको सही उपचार गरे मात्र भारतको भबिष्य सुरक्षित र सुन्दर बन्न सक्छ भन्ने निष्कर्श निस्कन्छ ।